Shwe Yoe – Page3– Daily Sports News
ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲ ရှုံးထွက်(၃၂)သင်းအဆင့်(ပထမအကျော့)ပွဲတွေကိုတော့ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ(၂၀)ရက်တစ်ရက်တည်းမှာ ကစားသွားဖို့ရှိပါတယ်။ ယူရိုပါလိဂ်အုပ်စုအဆင့် ပထမနေရာရ (၁၂)သင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ကထွက်လာ တဲ့(၈)သင်းအနက် အမှတ်ပိုများတဲ့ (၄)သင်းကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ပြီး ပွဲစဉ်ရေးဆွဲတာဖြစ်လို့ ထိပ်သီးအသင်းအများစုက အခုတစ်ပတ်ပွဲစဉ်တွေမှာ အဝေးကွင်းသွားရောက်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စုအဆင့်မှာ မှန်းသလောက် မဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရိုးမားအသင်းလောက်ပဲ အိမ်ကွင်းကစားရဖို့ရှိပါတယ် . . . စပို့တင်းလစ္စဘွန်း နှင့် ဘာရှက်ဆီဟီ
ပရိသတ်တွေအမြင်မကြည်တဲ့အသင်းဖော်ကို ချီးကျူးစကားဆိုလိုက်တဲ့ ဖရက်ဒ်
မန်ယူနိက်တဒ်ရဲ့ ဇန်နဝါရီလအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့ ဖရဒ် က အသင်းဖော်ပေါဂ့်ဘာ ကိုအမြန်ဆုံးကြံခိုင်မှု့ပြန်လည်ရရှိပြီး အသင်းကိုကူညီနိုင်ဖို့ပြန်လာစေလိုကြောင်းဆိုပါတယ်။ဖရဒ်က” ပေါဂ့်ဘာက တကယ်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။သူကထူးခြားတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပြီးအသင်းကိုလည်းဩဇာညောင်းသူမျိုးပါပဲ။ကံမကောင်းစွာပဲသူကဒီရာသီမှာဒဏ်ရာပြသနာအများအပြားကြုံတွေ့နေရတယ်လေ။ဒါကဘောလုံးလောကရဲ့အခြေနေပါပဲ။ ” ” ဒဏ်ရာရနေလို့ သူကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ပျက်လျက်ရှိနေတာပါပဲ။ဒါပေမယ့်သူကအရမ်းအလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်တာကြောင့်မကြာခင်မှာပြန်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျနော်တို့သူ့ကိုလွမ်းနေတယ်ဆိုတာနဲ့ သူကသိပ်ကိုကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သူ့ဒဏ်ရာအမြန်သက်သာစေဖို့ဆုတောင်းပါတယ်။သူကကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ပြီး အသင်းကိုလည်းရာနှုန်းပြည့်ကူညီနိုင်သူမဟုတ်လား။”လို့ဆိုပါတယ်။ လက်ရှ်ိမှာတော့ ဒူဘိုင်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေတဲ့ဘပေါဂ့်ဘာ က ယူနိက်တဒ်နဲ့အတူ လေ့ကျင့်ခန်းမဆင်းတာ နှစ်လနီးပါးကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သလို အေးဂျင့်ရိုင်းအိုလာကြောင့်လည်း ပရိတ်သတ် ၊အသင်း၊ ကစားသမားဟောင်းတွေကြား မှာ ပစ်မှတ်အဖြစ်
ယူနိုက်တက် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရနိုင်မလား သုံးသပ်လိုက်တဲ့ ဘာဘာတော့ဗ်
ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက် အဓိက ပြိုင်ဘက်ချယ်ဆီးကို အလဲထိုးခဲ့ကာ အမှတ်ကွာဟမှုကို လျော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အဆင့် ၄ က ချယ်ဆီးအသင်းထက် ၃ မှတ်သာ လျော့နေခဲ့လို အဆင့် ၄ အတွင်း ၀င်ရောက်နိုင်ဖို့ နီးစပ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ချယ်ဆီးကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာတော့ တိုက်စစ် က စား သ မား
အသင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုသုံသပ်ပြီး ဆိုးလ်ရှားအပေါ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ဖရက်ဒ်
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဖြစ်သူ ဖရက်ဒ် က ခြေစွမ်း ကောင်းတွေ ပြသ နိုင်မှု ကြောင့် ချီးကျူး ခံနေရမှု အပေါ် ပျော်ရွှင် ဝမ်းမြောက် နေပြီး ရလဒ် မတည်ငြိမ် တဲ့ အသင်း မှာ ပုံစံ ကောင်းတွေ ပုံမှန် ပြသ နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက်
ယူရိုပါလိဂ်၃၂သင်းအဆင့် ရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲ အဖြစ် ကလပ်ဘရုဂ်ျ အသင်းနဲ့ မကစားမှီ ပုံမှန်လုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ ပြောကြားချက်များကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အီဟာလိုအတွက်ပွဲထွက်ခွင့်ရနိုင်မလား? ” ကောင်းပြီ၊ဒီနေ့တော့ကျနော့်အသင်းအကြောင်းမပြောနိုင်သေးဘူး။ဒါပေမယ့်ကျနော့်အသင်းကို အလှည့်ကျစနစ်နဲ့ ရှေ့လာမယ့်ပွဲတွေတိုင်းကိုလှည့်ပတ်သုံးရလိမ့်မယ်။ဒီတော့သူလည်းပွဲစထွက်နိုင်တာပဲလေ၊ဒါပေမယ့် ရာနှုန်းပြည့်ဆုံးဖြတ်ရတာတော့မဟုတ်သေးဘူး။အိုဒင် က ကျနော့်အတွက် မတူကွဲပြားတဲ့ကစားသမားပါ၊သူက တကယ့်တိုက်စစ်မှုးတစ်ယောက်ပဲ။ပြီးတော့ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့တိုက်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျနော်တို့လေ့ကျင့်ရေးမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပြီ။တိုက်စစ်မှုးတစ်ယောက်ကဘယ်လိုကစားရမလည်းသူသိသလို၊သူကတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားပါ၊သူ့ကို အသင်းမှာထည့်ပေါင်းပြီးပါပြီ။ ကောင်လေးတွေကသူ့သီချင်းကိုတောင်နားထောင်ပြီးနေပြီ၊ဒါကြောင့်သူကွင်းထဲမှာအမြန်ဆုံးအထိုင်ကျဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။သူကရာသီတစ်ခုလုံးလွဲထားတာကြောင့် အပိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုများစွာလုပ်ဖို့လိုအပ်တာကိုကျနော်သိရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကြိအချိန်ပေးနိုင်သမျှထက်ပိုပြီးများများပေးနိင်ဖိုပေးနိုင်သမျှထက်ပိုပြီးများများပေးနိင်ဖို့ကျနော်ကြိုးစားနေတာပါ။ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲမှာတော့သူကံမကောင်းစွာပဲဂိုးမရခဲ့ဘူး။ဒါကတကယ့်အခွင့်အရေးကောင်းပဲလေ၊ရခဲ့ရင်သိပ်ကောင်းတဲ့စတင်မှု့ဖြစ်လာမှာပါ၊ ဒါပေမယ့်မကြာခင်သူအခွင့်အရေးတွေကို အသုံးချနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။
မန်ယူနိက်တဒ်တိုက်စစ် က စား သ မား မားကပ်စ်ရရ်ှဖိုဒ့် က လက်ရှိမှာ ဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူပြီး ကုသမှု့မှတ်တမ်းတွေအရ နောက်ထပ်လအနည်းငယ်ထပ်မံအနားယူရမယ်လို့နည်းပြဆိုးလ်ရှားကဆိုပါတယ်။ နောက်ကျောရိုးအဆစ် မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာက ထင်တာထက်ဆိုးရွားခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ကုသမှု့နဲ့ပြန်လည်ကြံခိုင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေပေမယ့်လည်း ဘောလုံးကစားဖို့အတွက်တော့ တိုးတက်မှု့ကနှောင့်နှေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားက” ဒီရာသီသူပြန်ကစားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဒီလိုထိခိုက်မှု့ရှိပေမယ့်လည်းကျနော်တို့ကအဆုံးထိဆက်သွားရမှာပဲလေ၊ဒီရာသီတစ်ခုလုံးကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒဏ်ရာအတွက်အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ကျနော်ကဆရာဝန်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ်လို့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အနေထားထက်ပိုပြီးမြန်ဆန်စွာကြံခိုင်မှု့ပြန်ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ် လ အနည်းငယ်ကတော့သေချာပေါက်သူနားရမှာပါ။သူယူရိုပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ကစားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူ့မှာကြံခိုင်မှု့မပြည့်ဝရင်ကျနော်တို့စေလွှတ်နိုင်ပါ့မလား
အောင်လနောက်ဆုံး ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမှာ ပြန်လည်ထိုးသတ်မှာ ဖြစ်ပြီး ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ လက်ရှိ မစ်ဒယ်ဝိတ်ခါးပတ်က ရုရှားနိုင်ငံသာ ဗီတာလီဘစ်ဒစ်ရ်ှဆီက ရယူထားတာ ဖြစ်ပြီး အခုအခါမှာတော့ ဘစ်ဒစ်ရ်ှက ပြန်လည်စိန်ခေါ်ပြီး သူ့ခါးပတ် ပြန်လည်ရရှိရေး ကြိုးပမ်းလာခဲ့ပါပြီ။ ဒီသတင်းကိုတော့ ONE CHAMPIONSHIP ရဲ့
လိင်တူချစ်သူများကို ထိပါးအော်ဟစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မန်ယူပရိသတ် အချို့ကို ကွင်းအတွင်းသို့ ဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်း ချယ်လ်ဆီး ကြေညာ
ယင်းပွဲမတိုင်မီ မန်ယူအသင်းပရိသတ်အချို့သည် လိင်တူချစ်သူများကို ထိပါးစော်ကားသည့် အော်ဟစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ အော်ဟစ်စော်ကားမှုများမှာ လက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်း၊ ယင်းအတွက်ကြောင့် ယင်းပရိသတ်များကို ကွင်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး၊ အချို့ကိုလည်း ပွဲကစားစဉ်အချိန်အတွင်း ကွင်းအတွင်းမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာစေခဲ့ကြောင်း ချယ်လ်ဆီးအသင်း၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည် ပြီးခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့က ကစားခဲ့သော ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ချယ်လ်ဆီး(၀-၂)မန်ယူပွဲတွင် လိင်တူချစ်သူများကို ထိပါးသည့် အော်ဟစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်
နော်ဝစ်ခ်ျ၊ ဝက်ဖို့ဒ်၊ နယူးကာဆယ်တစ်သင်းလုံးပေါင်းထက် ဒီဘရိုင်းတစ်ယောက်ထဲက ဂိုးပိုများနေ
မန်စီးတီးရဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် ဒီဘရိုင်းဟာ ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ အထူးခြေစွမ်းပြကစားလျက်ရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဂိုးသွင်းယူနိုင်စွမ်းရှိသလို အသင်းဖော်တွေကို ဂိုးရအောင်ဖန်တီးပေးရာမှာ အထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီဘရိုင်းဟာ ညကယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ ဝက်စ်ဟမ်းနဲ့ပွဲမှာလည်း ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပြီး တစ်ဂိုးသွင်း၊ တစ်ဂိုးဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မန်စီးတီးက ဝက်စ်ဟမ်းကို ၂-၀ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာတော့ ဒီဘရိုင်းဟာ ပွဲချိန်မိနစ် ၃၀ မှာ ရိုဒရီရဲ့အဖွင့်ဂိုးကို ဖန်တီးပေးခဲ့သလို ၆၂ မိနစ်မှာ ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗားရဲ့ပေးပို့မှုကနေ
အမ်ဘတ်ပီဟာ ဘောလုံးလောကရဲ့အနာဂတ်ကစားသမားပဲလို့ ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ရော်နယ်ဒို
ဘောလုံးလောကမှာ အောင်မြင်မှုများစွာရယူခဲ့ပြီး လက်ရှိအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမား ၂ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ ဂျူဗင်တပ်အသင်းတိုက်စစ် က စား သ မား ရော်နယ်ဒိုကတော့ PSG အသင်းရဲ့ကြယ်ပွင့်ကစားသမားလေး အမ်ဘတ်ပီအပေါ် ချီးကျူးပြောဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူက အမ်ဘတ်ပီဟာ ဘောလုံးလောကရဲ့အနာဂတ်ပဲလို့ ချီးကျူးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမ်ဘတ်ပီဟာ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ မိုနာကိုအသင်းနဲ့